Dr. Abiy Feestivaalii Ispoortii Daalaasirraa hafuun hiikaa maalii qaba? - BBC News Afaan Oromoo
Gaaffii Imbaasiin Itoophiyaa Ameerkaatti argamu ministirri muuummee Abiy Ahimad akka Festivaalii Ispoortii magaalaa Daalaasi irratti hirmaataniif dhiyeesseef Federeeshiniin Ispoortii Itoophiyaa Kaaba Ameerkaa kuffisun dhagahameera.
Federeeshiniin Ispoortii Itoophiyaa Kaabaa Ameerikaa erga walgahii sa'aatii shanii ol fudhatee gaggeesseen booda gaaffii ministirichi waltajjii festivaalii barana Daalaasitti qopheessuu irratti argamanii haasawa gochuuf dhiyaate kuffisee jira.
Boordichi sagalee caalmaan murtee kanarra ga'uu dubbii himaan Federeeshinichaa Obbo Iyaayyuu Zanaba BBC'tti himaniiru.
''Haa dhufan jedhamee ture. Garuu hin dhufiin warri jedhan sagaleen waan caalaniif akkanatti murtaa'e. Yeroo biraatti haa darbus hin jedhamne. Waan Dr. Abiy hojjetaa jiran ni deggerra. Hagam waan hojjetaa jiran deggerrus ammatti dhufuun isaanii sirrii miti jedhutu caale waan ta'eef akkanatti murtaa'e,'' jedha.
Federeeshinichi maaliif dhorke?
Federeeshinichi Ministirri Muummee argamanii haasawa gochuu kan dhorkeef ammayyuu Diaspora biratti fudhatamummaan bulchiinsi isaanii qabu gaaffii keessa jiraachuu agarsiisa jedhu xiinxalaan siyaasaa Dr. Heenok Gabbisaa.
Jalqabumarra waltajichi waltajjii akkamii akka ta'e wayita ibsan, '' Waltajjichi kan warri habashoota ta'an wagggaatti altokko walga'anii isteetota adda addaa gidduutti gaggeessaniidha. Waltajjiin kan Oromoo OSFNA jedhamus addatti jira. Waltajjiin ESFNA jedhamu kun ummattoota Itoophiyaa hunda waan hammate natti hinfakkaatu,'' jedhan.
Waltajjiin kun kaayyoo ispoortiin alatti kaayyoo biraas qabaachu wayita ibsan. ''Waltajjichi waltajjii ispoortii haa fakkaatyyu malee lafa itti marii siyaasaafi odeeffannoo waljijjiiran ofi keessaa qaba. Aadaa adda addaa agarsiisuufi dhimmoota siyaasaa hedduu ofi keessaa qaba. Namoonni kubbaa ilaaluuf haa dhufaniyyuu malee, waltajjichi kaayyoo akkasii qaba'' jedhan.
Ministirri Muummee Abiy Ahimadiif achirratti argamuun maal barbaachisummaansaa, gaaffii jedhuuf wayita deebii kenna, ''Siyaasa biyya keenyaa keessatti diyaasporaan shoora olaanaa qaba. Hawaasa dkana kan siyaasaan cimanii jiran tarii gara siyaasa biyyaatti deebisuudhaaf hawwanii ta'uu danda'a,'' jedhan Dr. Heenook.
Haa ta'uyyuu malee kana gochuusaaniitiin Ministirri Muummee kun dogongora guddaa uumeera jedhu. ''Dogongorri isaan uuman, durumaanuu waltajjii ummanni Itoophiyaa hundi irratti hinargamnerratti hirmaachuuf karoorfachuun sirrii miti'' jedhu Dr.Heenook.
Boordiin Ispoortii kan feestivaala sana qopheessu ministirri muummee ammaaf argamuusaanii akka hin barbaanne ibsee, gara fuulduraatti garuu akka irratti argamaniif haala akka mijeessu beeksiseera. Maaliif argamuusaanii akka hinsimannerratti yaada kennaniiru Dr.Heenook.
''Akkuma beekamu Ministirri Muummee dhaaba siyaasaa ADWUI irraati kan dhufuu. Dhaabi kuni ammoo waggoota 27n darbaniif dhiiga ummattoota Itoophiyaa harkarraa qaba.
Garuu ministirri muummee kun yeroo ammaa fedhii jijjiiramaa waan qabaniif, wantoota jajjabeeffaman hedduu hojjechaa jiru. Haata'uu malee dalagaan ministirri muummee fi bulchiinsi haaraan biyyattii hojjetaa jiran ammayyuu diyaasporaa biratti beekamtii guutuu akka hin arganne agarsiisa,'' jedhan.